ပြည်​တွင်းသတင်း – PoPinVdo
November 13, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on မူးယစ်နှိမ်နင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့် သတိပေးခြိမ်းခြောက်မူတွေခံရတယ်လို့ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြော
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့် သူ့အပေါ် သတိပေးခြိမ်းခြောက်တာတွေရှိသလို ဝေဖန်ခံရတာတွေ ရှိတယ်လို့ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် က ဒီနေ့ ပြောပါတယ်။ မန္တလေးမြို့မှာ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ UNODC နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အမျိုးသား မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒ…
November 13, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on ယခင် ဧရာဝတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ဟောင်းထံမှ ရရန်ကျန်ရှိသည့် ငွေကျပ် ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ကို ပြန်လည်ရရှိပြီဟုဆို
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဟောင်းမှ အစိုးရအဖွဲ့သစ်သို့ ပြန်လွှဲပြောင်းပေးရန် ကြန့်ကြာနေသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေများအတွင်းမှ ကျန်ရှိနေသည့် ငွေကြေးများအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီပညာကျန်းမာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းထံမှ သိရသည်။ အစိုးရသစ်ကို ပေးသွင်းရမည့် ကျပ် ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံကို နိုဝင်ဘာလ…
November 13, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on မကွေးတိုင်း၊ ချောက်မြို့နယ်မှာ လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၂ ခုအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်
မကွေးတိုင်း၊ ချောက်မြို့နယ်ရှိ ဆင်က လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ စွယ်ပေါက်ကံ လေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှစ်ခုအတွက် Infa Captial Myanmar-ReEx(ICM) ကုမ္ပဏီက အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ICM ကုမ္ပဏီ စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာ…
အလုံမြို့နယ်ရှိ အနုကြမ်းစီးခဲ့မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ၅ ဦးကို ကျပ် ၅ သိန်းစီဖြင့် ငှားရမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်
November 13, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on အလုံမြို့နယ်ရှိ အနုကြမ်းစီးခဲ့မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ၅ ဦးကို ကျပ် ၅ သိန်းစီဖြင့် ငှားရမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်
ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံမြို့နယ်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ အင်ဂျင်ဝိုင်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီအား အနုကြမ်းစီးခဲ့မှုတွင် အဓိက ခိုင်းစေခဲ့သူမှာ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ၁၄ ရပ်ကွက်တွင်နေသူ မျိုးမြင့်အောင်(ခ) အရှည်ကြီး ဆိုသူဖြစ်ပြီး အနကြမ်းစီးမှုတွင် ပါဝင်သူ ၅ ဦးအား ကျပ် ၅ သိန်းစီဖြင့်…
မြောင်းမြတွင် သိန်း ၁၉၀၀ ကျော်ဖိုး ရွှေနှင့် ငွေများ ဖောက်ထွင်းခံရ
November 13, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on မြောင်းမြတွင် သိန်း ၁၉၀၀ ကျော်ဖိုး ရွှေနှင့် ငွေများ ဖောက်ထွင်းခံရ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့၊ အမှတ် ၈ ရပ်ကွက်တွင် ကျပ်သိန်း ၁၉၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ ရွှေထည်ပစ္စည်းများနှင့် ငွေကြေးများ ဖောက်ထွင်းခံရမှု နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မြောင်းမြမြို့၊ အမှတ် ၈…
ရွှေတောင်ကြားမြေကွက်ကို ဦးအောင်သက်မန်းက ကျပ်သိန်း ၃၆၀၀၀ ဖြင့် အစိုးရထံမှဝယ်ယူရာတွင် ၇၀ % ပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိနေ၍ လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်း
November 13, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on ရွှေတောင်ကြားမြေကွက်ကို ဦးအောင်သက်မန်းက ကျပ်သိန်း ၃၆၀၀၀ ဖြင့် အစိုးရထံမှဝယ်ယူရာတွင် ၇၀ % ပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိနေ၍ လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေကွက် (၂) ကွက်ရောင်းချမှုအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ရရှိရန်ကျန်ရှိနေသော ငွေကျပ် ၂၈၈၀ ဒသမ ၅ သန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်က ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် သရက်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးကံမြင့်က မေးမြန်းခဲ့သည်။…
Breaking News-ရန်ကုန် အလုံမြို့နယ် ဗဟိုလမ်း ခြံအမှတ် ၅၁ ခ တွင် အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်၊ ဓားစာခံတစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွား
November 12, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on Breaking News-ရန်ကုန် အလုံမြို့နယ် ဗဟိုလမ်း ခြံအမှတ် ၅၁ ခ တွင် အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်၊ ဓားစာခံတစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွား
Breaking News- ရန်ကုန် အလုံမြို့နယ် ဗဟိုလမ်း ခြံအမှတ် ၅၁ ခ တွင် အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်၊ ဓားစာခံတစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွား ရန်ကုန် အလုံမြို့နယ် ဗဟိုလမ်း ဗဟုိုအမျိုးသမီးဆေးရုံရှေ့ မျက်နှာချင်းဆုိုင် ခြံအမှတ် ၅၁ ခ တွင်…
ကျောက်ဖြူ SEZ စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်မည့်မြေနေရာတွင် ဦးသိန်းစိန်အမည်ဖြင့် မြေဂရမ်ပေါက်ပါနေ၍ ဖြေရှင်းပေးစေလိုဟု ဒေသခံလယ်သမားများပြောဆို
November 12, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on ကျောက်ဖြူ SEZ စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်မည့်မြေနေရာတွင် ဦးသိန်းစိန်အမည်ဖြင့် မြေဂရမ်ပေါက်ပါနေ၍ ဖြေရှင်းပေးစေလိုဟု ဒေသခံလယ်သမားများပြောဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် တည်ဆောက်မည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် (SEZ) တည်ဆောက်မည့် မြေနေရာတွင် ဦးသိန်းစိန်အမည်ဖြင့် မြေဂရမ် ၃၂ ဒဿမ ၂၀ ဧက ဂရမ်ပေါက်ပါ နေ၍ ၎င်းဦးသိန်းစိန်မှာ ယခင်သမ္မတဟောင်း ဟုတ်/ မဟုတ်ကို ဖြေရှင်းပေးစေလိုသည်ဟု…
ပွဲပျက်ပွဲဖျက်ခံခဲ့ရတဲ့ နတ်​တလင်းမြို့​ဂေါပကအဖွဲ့အ​ရေး​ပေါ်အစည်းအ​ဝေး ​ခေါ်ယူ
November 12, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on ပွဲပျက်ပွဲဖျက်ခံခဲ့ရတဲ့ နတ်​တလင်းမြို့​ဂေါပကအဖွဲ့အ​ရေး​ပေါ်အစည်းအ​ဝေး ​ခေါ်ယူ
နတ်​တလင်းမြို့ သကျမဟာ မြတ်​မုနိဘုရားကြီး ​ဂေါပကအဖွဲ့အ​ရေး​ပေါ် အစည်းအ​ဝေး ​ခေါ်ယူ တက်​​ရောက်​သူ( ၁၆)​ယောက်​ရှိအစည်းအ​ဝေး ထက်​ ဝက်ေ ကျာ်​ တ က်​​ရောက်​၍ အစည်း​ဝေးထ​မြောက်​ ။ အစည်း​အ​ဝေးတွင်​ဥက္ကဌ မှ ဘုရားကြီးပွဲ​တော်​ မကျင်းပရ​သေးခင်​ (၁၀-…
ရန်ကုန်-မန်းလေး ရထားပေါ်မှ ကူညီပါရစေဆိုတဲ့လူတွေရှေ့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်
November 12, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on ရန်ကုန်-မန်းလေး ရထားပေါ်မှ ကူညီပါရစေဆိုတဲ့လူတွေရှေ့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်
၁၁.၁၁.၁၈ရက်​​နေ့မန္တ​လေးမှရန်​ကုန်​မြို့သို့(၃)နာရီထွက်​​သော​လေအိပ်​ရထားရိုးရိုတန်းတွဲ ၅.ခုံနံပါတ်​.၂၂.၂၃.၂၄၂၅.ခရီးသွားများမ ​နေပြည်​​တော်​မှတက်​၍​ဈေး​ရောင်းသူထံမှထမင်းဝယ်​စာရာအန်​​ငွေ မ​ပေးဘဲ​ဈေးသည်​မှ​နောက်​မှလာအန်​မယ်​ဆိုပြီး…. အတင်းထွက်​သွားရာခရီးသည်​မှမရဘူးချက်​ခြင်းအန်​​ပေးဖို့​ပြောရာမှ​ဈေး​မိန်​မ မှဖိနပ်​နဲ့ခရီးသည်​အားအဆက်​မပြတ်​ရိုက်​နှက်​ပြီး​​… ဈေး​ရောင်း​ယောက်ျားမှလက်​သီးနဲ့ဝင်​ထိုးကျန်​​ဈေးသည်​များမှအုပ်​စုဖွဲ့၍ဝိုင်းရိုက်​ပွဲဖြစ်​ပွားခဲ့စဉ်​တွဲထိန်းများမှ.ရထားလိုက်​ရဲလိုက်​ရှာ​နေစဉ်​​ဈေးသည်​များအခြား တွဲသို့ထွက်​သွားပြီးနာရီဝက်​ခန့်​ကြာမှမီးရထားရဲများ​ရောက်​လာပြီး ​… ဈေးသည်​များမရှိ​တော့​ကြောင်းရထား​ပေါ်မှဆင်းသွားပြီ ဖြစ်​​ကြောင်းမဟုတ်​မဟတ်​လုပ်​ဇာတ်​ခင်း၍ခရီးသည်​အား​ပြောရာ ပျဉ်းမနားအဝင်​ရထား​ပေါ်မှ​ဈေးသည်​များခုန်​ချသွားရာရထား​ပေါ်ပါ …. ခရီးသည်​များမှဟိုမယ်​ယခုမှဆင်းသွားတာဘာ​ကြောင့်​ရဲလိမ်​​ပြောရသလဲလို့​ပြော​သောအခါဒုတပ်​ကြပ်​​အောင်​မင်းနှင့်​ဒုတပ်​ကြပ်​တင်​​ထွေးတို့မှဖမ်းခြင်​တိုင်းဖမ်​လို့မရဘူး။ အမျိုးသ္မီး​တွေကိုလို့မင်းမဲ့စရိုက်​ဆန်​ဆန်​ခရီးသည်​အား​သွေးထွက်​​ဒဏ်​ရာရ​အောင်​ပြူလုပ်​သူ​ဈေး သည်​ဖက်​မှကာကွယ်​​ပြောကြားတဲ့အခါ ကျမ​ဒေါ်မိမိကြီးကရဲတပ်​ကြပ်​​အောင်​မင်းဆိုသူအားမိန်းမဖြစ်​ဖြစ်​​ယောက်ျားဖြစ်​ဖြစ်​ဥပ​ဒေမဲ့ပြုလုပ်​ရင်​ဖမ်းစည်းအ​ရေးယူရဖြစ်​ကြာင်း​ပြောပြခဲ၏​။ ဈေးသည်​များအားလဲ ရထား​ပေါ်သို့တက်​​ရောင်းချခွင့်​အားရထားရဲများမှလိုင်း​ကြေးယူ၍​ရောင်းချခွင့်ုပြု​ကြောင်း​ဈေးသည်​များမှ​ပြောပြ၏။၎င်းဖြစ်​စဉ်​အား ပျဉ်​မနားဘူတာသို့ကျမဆင်း​နေခဲ့ပြီးအမှု့ဖွင့်​ရန်​ကူညီ​ပေးခဲ့ပြီး​နောက်​ရထားဖြင့်​ရန်​ကုန်​သို့လိုက်​ရန်​ပျဉ်​မနားရုံပိုင်​ကြီးမှအကူအညီ​ပေးခဲ့ပါတယ်​…